Sintomy ny kalandrie ho an'ny 2019 maimaim-poana | Famoronana an-tserasera
Judit Murcia | | dia midika hoe
izany manatona 2019 ary na dia mbola misy iray volana eo ho eo aza, tototry ny krisimasy ny arabe ka mahatonga antsika hieritreritra ny taona vaovao tokony ho.
Mbola kely sisa ny hamita ity taona 2018 ity ary mba tsy hirotorotoana tadiavintsika omeo loharano izay manampy anao hiala amin'ny tongotra ankavanana amin'ity ho avy 2019. Maimaimpoana daholo, ka safidio izay tianao indrindra.
1 Layout sy endrika
2 Misintona tranokala
3 Kalandrie misy endrika kanto
4 Alimanaka amin'ny endrika teny
Layout sy endrika
Tsy maintsy miomana isika mba tsy hahatratra antsika ny omby, ary samy te hanana kalandrie nohavaozina handaminana ny tenantsika isika. Manana azy ireo amin'ny endrika rehetra izahay:
Para manantona eo amin'ny rindrina.
En Excel handamina ny tetikasanay amin'ny solosaina.
Para printy ary apetraho eo ambadiky ny varavarana io.
Andao hizara endrika isan-karazany mba hahafahanao misafidy izay mifanentana amin'ny tsironao. Ny sasany amin'izy ireo dia manana extension .ai, midika izany fa azonao atao ny manova miaraka amin'ny Adobe Illustrator. Raha manana fanontaniana ianao dia hitanao ato amin'ity bilaogy ity Tutorials mba hianaranao mitantana ny tenanao.
Misaotra ny Internet, izay ahitanao ny zava-drehetra sy bebe kokoa, manana safidy maro isika hahazoana ny kalandrie amin'ity taona manaraka 2019 ity.
Misy tranokala fampidinana maimaim-poana izay Manolotra kalandrie hijerena isan-kerinandro, isam-bolana ary isan-taona. Ireto farany no matetika matetika.
Ny ankamaroan'ny rohy atolotray anao avelao ianao hisintona fisie zip. Ao anatin'izany no ahitantsika antontan-taratasy maromaro misy endrika samihafa: jpg, ai, eps, anko amin'ireo rakitra hafa.
Kalandrie misy endrika kanto
Ity famolavolana ity dia tena moderno, ny loko tsy mitongilana amin'ny feon'ny hatsatra. Ary na dia ao aza izany anglisyAzontsika atao ny manitsy azy amin'ny fisie .ai ary manova ny anaran'ny volana amin'ny fomba tena tsotra fipihana indroa amin'ny lahatsoratra. Azonao atao ny mandeha amin'ny tranokala fampidinana amin'ny fipihana eto.
Volavola bebe kokoa sariaka sy zaza izay isam-bolana dia a biby tsy mitovy. Azontsika atao ny mampiasa azy io any amin'ny sekolin-jaza na ho an'ireo zanatsika kely. Azonao atao ny mandeha amin'ny tranokala fampidinana amin'ny fipihana eto.
Este rohy Izy io dia mitarika antsika mankany amin'ny tranonkala iray ahafahanao misintona isam-bolana amin'ny taona a famolavolana voninkazo tena bohemia. La typography dia script, izany hoe, toa nosoratan-tanana. Tena malina sy tonga lafatra amin'ny fanontana. Ny fanindrianao eto hitondra anao any amin'ny Sehatra Google Drive, aiza no ahitanao ny cfandaharam-potoana feno, ny lisitr'ireo rakitra samihafa.
Alimanaka amin'ny endrika teny
Ireto misy kalandrie manaraka ireto dia betsaka kokoa mifantoka amin'ny fandaminana tetik'asa. Momba izany rakitra banga manana amin'ny solosaina na pirinty. Izy ireo dia mety amin'ny fandaminana. Ny iray amin'ireo tombony azon'izy ireo dia izy ireo ovaina ary noho izany ny afaka mifanaraka amin'ny zavatra ilaintsika isika ary ny tsiro. tsindrio eto hiditra amin'ny tranonkala.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Kalandrie 2019 maimaim-poana